APDATE:- Sacuudiga Iyo Iiraan Oo Heshiis Ka Gaaray Murankii U Dhaxeeyay Ee Ku Saabsanaa ‘Xajka’ | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
APDATE:- Sacuudiga Iyo Iiraan Oo Heshiis Ka Gaaray Murankii U Dhaxeeyay Ee Ku Saabsanaa ‘Xajka’
MAKA(P-TIMES)-Dowladaha Sucuudiga iyo Iiraan ayaa heshiis ka gaaray muranka dhanka Xajka ah oo labadaasi dal u dhaxeeyay labadii sano ee la soo dhaafay.
Wakiilka Hoggaamiyaha Kacaanka Iiraan u qaabilsan Arrimaha Xajka iyo xujeyda Sayid Cali Qasi Askar ayaa sheegay in Dowladda Sucuudiga ay aqbashay Shuruud ay Iiraan ka gudbisay nidaamka xajka ee Sanadka soo socda gaar ahaan xujeyda Iiraan.
Waxaa uu sheegay in Boqortooyada Sucuudiga ay aqbashay sugidda amniga,sharafta iyo nolosha xujeyda Iiraan,taas oo ay iiraan ka carootay Sanadkii 2015kii markaas oo isbuursi ay sameeyeen Xujeydii Sanadkaas ay Iraan uga dhinteen Xujey badan.
86,ooo Iiraaniyiin ah ayaa la filayaa in ay u xajiyaan Sanadkan,maaddaama labada dowladood ay heshiis ka gaareen murankii dhanka Xajka ahaa ee u dhaxeeyay labadii sano ee la soo dhaafay.
Iiraan waxaa ay Sanadkaas Xajka ku weysay 465 Xaaji oo ka mid noqday dadkii ku dhintay isbuurashadii ka dhacday Xajka.
Dowladda Sucuudiga ayaa sheegtay in shilkaasi ay ku dhinteen 700 oo Xaaji,laakiin Dowladaha Muslimka ah ayaa tirada ku sheegay 7000 oo Xaaji kaddib markii la tira koobay Waddan kasta kaga dhimatay Xajka Sanadkaas.